रुसी सेना कहाँ चुक्यो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperरुसी सेना कहाँ चुक्यो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
रुसी सेना कहाँ चुक्यो ?
विश्वमै सबैभन्दा धेरै र शक्तिशाली सैन्य सामर्थ्य भएका देशमध्येको रुसले युक्रेन आक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा आफ्नो क्षमता देखाउन सकेन । धेरै पश्चिमा सैन्य विश्लेषकहरूले रणभूमिमा हालसम्म रुसको प्रदर्शनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। एक जनाले यसलाई ’निराशाजनक’ भनेका छन् । युक्रेनमा रुसी सेनाको अघि बढ्ने क्रम एकदमै सुस्त भएको छ भने कतिपयले उसले बेहोरेको क्षतिका कारण पुरानो सामर्थ्य फेरि हासिल गर्ने कुरामा आशङ्का गरेका छन् ।
“रुसी पक्षले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेको छैन र यसको अन्त्यसम्म पनि पूरा गर्ने सम्भावना कम छ,“ नेटोका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले यसै साता भनेका हुन् ।
त्यसो भए रुस कहाँ चुकेको छ त ?
मैले रुसले गरेका गल्तीबारे पश्चिमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी र गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको छु ।
प्रतिरोधको शक्ति र युक्रेनको सानो सैन्य शक्तिलाई कमजोर आकलन गरेर रुसले सबैभन्दा पहिलो गल्ती ग¥यो । रुसले वर्षमा ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ। जबकि युक्रेनको रक्षा बजेट चार अर्ब अमेरिकी मात्रै डलर छ । रुस र अरूले पनि रुसको सैन्य क्षमतालाई वास्तविक भन्दा बढी आकलन गरे। राष्ट्रपति पुटिनले सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना सुरु गरे र उनी आफैँले पनि बढाइचढाइमा विश्वास गरे । ब्रिटिश सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार रुसले गहन पारमाणविक अस्त्र र परीक्षणमा ठूलो लगानी गरेको छ। नयाँ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र निर्माणका लागि पनि ठूलो लगानी गरेको छ । रुसले विश्वकै सबैभन्दा अत्याधुनिक ट्याङ्क टी–१४ आर्मता बनाएको छ । मस्कोस्थित रेड स्क्वाएरको विजयदिवस परेडमा देखिएको उक्त उपकरण युद्धमा प्रयोग भएको देखिएको छैन ।
युद्धमैदानमा प्रयोग भएका अधिकांश रुसी उपकरणहरू पुराना टी–७२ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी, तोप र रकेट लन्चर हुन् । आक्रमणको सुरुतिर रुस हवाई हमलामा अगाडि देखिएको थियो। उसले युक्रेनको एक वायुसेना बराबर आफ्नो तीन वायुसेनाको फौजसहितका लडाकु विमान सीमा नजिक पु¥याएको थियो ।
धेरै सैन्य विश्लेषकहरूले आक्रमणमा अघि बढेको रुसी फौजले धेरै छिटो आकाशमा आधिपत्य जमाउने आकलन गरेका थिए । तर त्यसो भएन । रुसको युद्ध क्षमतालाई सीमित गर्दै आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली अझै प्रभावकारी रहेको युक्रेनले सिद्ध गरेको छ ।
मस्कोले उसको विशेष टोलीले छिटो र निर्णायक मानिने आक्रमण गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरेको हुनसक्छ । रुसले सानो फौजको बलमा नै युक्रेनको प्रतिपक्षका लागि उत्रिनेहरूलाई परास्त गर्न सकिने ठानेको हुनसक्ने एक वरिष्ठ पश्चिमा गुप्तचर अधिकारीले बताए ।
तर उनीहरूले किएभ नजिकैको होस्टोमेल विमानस्थलमा आक्रमण गरेको केही दिनमै रुसी सेना त्यहाँबाट हट्न बाध्य भयो। त्यसकारण रुसले थप सैनिक, अस्त्र र आवश्यक आपूर्ति गर्न सकेन ।
रुस आफ्नो फौजका लागि आवश्यक आपूर्ति सडक मार्गबाटै गर्न बाध्य भयो । नाकाहरूमा सामान आपूर्ति गर्ने रुसी वाहनहरू ट्राफिक जाममा पर्दा एम्बुसमा पार्न युक्रेनीहरूलाई सहज भयो ।
सडकबाहिरबाट गुडेका केही ठूला बख्तरबन्द गाडीहरू हिलोमा फसेका छन् ।
भूउपग्रहमार्फत् किएभको उत्तरतर्फ देखिएको रुसी सैन्य सवारीसाधनको लस्कर किएभलाई घेरा हाल्न अझैसम्म सफल भएको छैन । बरु दक्षिणतर्फबाट रुसी सेना धेरै अघि बढेको छ र रेलमार्ग प्रयोग गरेर आफ्नो फौजका लागि आपूर्ति जारी राख्न सफल भएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनको सेनाले ’गति गुमाएको’ यूकेका रक्षामन्त्री बेन वालेसले बताएका छन् ।
“उनीहरू अड्किएका छन् र बिस्तारै तर निश्चित रूपमा ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन्,” उनले भने ।
नोक्सानी र कमजोर मनोबल
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न १,९०,००० सैनिक परिचालन गरेको थियो। त्यसको १० प्रतिशत उसले गुमाइसकेको बताइएको छ । तर रुस र युक्रेन दुवैतर्फको सेनातर्फ भएका क्षतिबारे भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । युक्रेनले १४,००० रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरे पनि अमेरिकाले त्यसको आधा फौज रुसले गुमाएको आकलन गरेको छ ।
पश्चिमा अधिकारीहरूले रुसी सेनाको मनोबल “एकदमै न्यून“ रहेको बताएका छन् । आक्रमणको आदेशअघि नै युक्रेन सीमानजिकको बेलारुस र रुसमा कैयौँ दिन बिताएका सैनिकहरू “चिसो, थकान र भोक“सँग सङ्घर्ष गरिरहेको अर्का अधिकारीले बताए ।
सैन्य क्षति बेहोरेको रुस आर्मिनियाको सीमानजिकै पूर्वी क्षेत्रमा रहेका सैनिकहरूलाई युक्रेन पठाउन बाध्य भएको छ ।
पश्चिमा अधिकारीहरूले सिरियाबाट झिकाइएका लडाकुसहित वाग्नर समूहका भाडाका सैनिकहरू छिट्टै युद्धमा सामेल हुने आकलन गरेका छन् । अरू केही उपलब्ध नभएकाले रुसले कमसल कुराले काम चलाउन खोजेको नेटोका एक अधिकारीको धारणा छ ।
आपूर्ति र बन्दोबस्ती
रुसले आधारभूत कुरामै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सिकारुले युद्धका रणनीतिहरूबारे कुरा गर्छन् तर व्यावसायिकहरूले बन्दोबस्तीका सामानको अध्ययन गर्छन् भन्ने एक पुरानो सैन्य कथन छ ।
युक्रेन युद्धमा रुसले बन्दोबस्तका सामानमा ध्यान नपु¥याएको धेरै प्रमाण छ । बख्तरबन्द गाडीहरू इन्धनविहीन भएका छन्, खाना र अस्त्रको अभाव भएको छ। बिग्रिएर छोडिएका रुसी सैन्य साधनहरू युक्रेनी ट्याक्टरहरूले सडकबाट पन्छाएका छन् ।
पश्चिमा अधिकारीहरूले रुसले धेरै अस्त्रहरू पनि खर्च गरिसकेको ठानेका छन्। रुसले ८५० देखि ९०० वटा लामो दूरीमा लक्ष्यभेदन गर्ने हतियारहरू प्रहार गरिसकेको छ। तिनमा क्रूज क्षेप्यास्त्रजस्ता अर्को अस्त्रले प्रतिस्थापित गर्न कठिन हुने किसिमका हतियारहरू पनि थिए ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले आफ्नो अभावपूर्तिका लागि रुसले चीनसँग सहयोग मागेको बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ पश्चिमा देशहरूबाट युक्रेनमा निरन्तर हतियारहरूको आपूर्ति भइरहेको छ। त्यसले उसको नैतिक मनोबल उच्च भएको छ ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई ८० करोड डलर रक्षा सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकाले आफैँले निर्माण गरेको ट्याङ्क प्रतिरोधी र विमान प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र पनि उपलब्ध गराउने बताएको छ। ’कामिकाजी’ नाम गरेको यो ड्रोन क्षेप्यास्त्र झोलामै बोक्न सकिने र गन्तव्यमा सानो बम पु¥याउने साधन हो ।
पश्चिमा अधिकारीहरूले पुटिनले थप क्रूरता प्रदर्शन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले पुटिनसँग युक्रेनी सहरहरूमा लामो समयसम्म बमबारी गर्ने सामर्थ्य कायमै रहेको बताएका छन् ।
अवरोधबीच पनि पुटिन पछि नहट्ने बरु युद्ध थप चर्काउने एक गुप्तचर अधिकारी बताउँछन् ।
उनी रुसले सैन्य बलमै युक्रेनलाई हराउन सक्नेमा निर्धक्क देखिन्छन् ।
व्यापक प्रतिरोधमा उत्रिएका युक्रेनीहरू पनि समय क्रमसँगै आपूर्ति अभावमा पर्ने तथा अस्त्र र जनशक्ति दुवैको अभाव हुनसक्ने आकलन उनीहरूको छ ।
युद्धका प्रारम्भिक दिनहरूमा भन्दा परिस्थिति धेरै फेरिएको भए पनि रुसी सेनालाई अझैसम्म युक्रेनीहरूले रोकेर राखेका छन् ।